विद्युतीय धरापमा परेर पाकिस्तानमा १४ सुरक्षाकर्मी मारिए - नेपालबहस
| १३:३४:०३ मा प्रकाशित
३० असोज, ग्वादर । पाकिस्तानको ग्वादर क्षेत्र नजिकै पर्ने बुजी टपमा १४ सुरक्षाकर्मीहरु मारिएका छन् । स्थानीय समय अनुसार बिहीबारको मध्यराती १२ बजे उनीहरुको मृत्यु भएको अधिकारीहरुले शुक्रबार जानकारी दिएका छन् ।
ओर्मारा नजिकै पर्ने बन्दरगाह राजमार्गमा घटना भएको हो । ग्वादरदेखि कराँचीसम्म तेल तथा ग्यास विकास कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीहरु पनि खटाइएको थियो । तर उनीहरु भने सुरक्षित रहेको जनाइएको छ । सैनिकहरु चढेको दुई ओटा सवारी साधन विद्युतीय धरापमा परेर दुर्घटना भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
विस्फोटन पछि सवारी साधन पनि पुरै जलेर नष्ट भएको छ । घटनाका बारेमा थाहा पाउनासाथ प्रधानमन्त्री इमरान खानले दुःख व्यक्त गर्दै मृतकका परिवारजन, इष्टमित्रप्रति सहानुभूति व्यक्त गरे । एएनआई
पाकिस्तानमा विस्फोट हुँदा सातको मृत्यु, ११२ घाइते २ दिन पहिले
पाकिस्तानको सिन्धमा सडक दुर्घटना, १३ जनाको मृत्यु १ महिना पहिले
आज उपत्यकामा १६१५ जना संक्रमित थपिए २३ मिनेट पहिले
फुङफुङे झरनामा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढ्दै २७ मिनेट पहिले
अमरगढी किल्लामा नेपाली सेनाद्वारा कोतघर निर्माण ५८ मिनेट पहिले
ट्रकले ठक्कर दिँदा एक पैदल यात्रीको मृत्यु १९ घण्टा पहिले
गण्डकीमा एक सय ५५ जना संक्रमित थपिए, दुई जनाको मृत्यु १९ घण्टा पहिले
यस वर्ष कास्कीमा कैदीबन्दीले टीका लगाएनन् २ दिन पहिले
पोखराको बजार क्षेत्रको २५ किमी सडक ‘अस्फाल्ट’ प्रविधिबाट कालोपत्रे ५ दिन पहिले
बीपीमा थप एक जना कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्यु २ दिन पहिले
खर्च व्यहोर्न नसक्ने संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न मन्त्रालयकाे निर्देशन ४ दिन पहिले
अस्पतालको लूट : कोरोनाको लक्षण देखिएकालाई ५० हजार र जटिल बिरामीलाई २ लाख धरौटी ! १ हप्ता पहिले
मधेशी फोरम र नयाँ शक्तिको एकीकरण यी कारणले रहस्यमय ! १ वर्ष पहिले
पेरुमा कोरोनाको संक्रमणबाट १७ प्रहरीको मृत्यु ६ महिना पहिले
फाल्गुन ३० गतेदेखि महिला फुटसल हुने २ वर्ष पहिले